Maxaa La Sameeyaa Markuu Baabasiirku Dillaaco: Astaamaha Iyo Daawaynta | Ragga Stylish
Dad badan, gaar ahaan dadka waayeelka ah, ayaa ku dhaca baabasiir. Kuwani waa xididdada dhiigga ee ku barara gudaha malawadka iyo dabada oo dhan. Waxaa jira noocyo babaasiir kala duwan oo kuxiran asalka iyo astaamaha. Waxaa jira qaabab badan oo lagu daaweyn karo waana inaad ogaataa goorta aad falcelin ku sameyn laheyd waqtiga si xanuunka uu aad uga yaraado oo xal dhaqso badan loo helo.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walba oo lagugu leeyahay waxa la sameeyo marka babaasiir dilaaco iyo sida looga saaro.
1 Astaamaha ugu waaweyn ee babaasiirta
2 Maxaa la sameeyaa markii baabasiir qarxo
3 U tag dhakhtar ku saabsan baabasiirka
Astaamaha ugu waaweyn ee babaasiirta
Baabasiirku waa xididdada dhiigga ee barara gudaha iyo hareeraha futada iyo malawadka. Dad badan ma oga in ay qabaan babaasiirta ilaa ay ka dhiig baxayaan, dareemayaan raaxo la'aan, ama bilaabayaan in ay xanuun keenaan. Boqolkiiba in yar oo dadkan ka mid ah ayaa u baahan kara qalliin. Si kastaba ha noqotee, babaasiirta badanaa waxaa lagu daaweyn karaa guriga. Babaasiirta dhiigbaxa waxay sameyn karaan buro ku wareegsan futada, taas oo la dareemi karo marka la nadiifinayo. Dhiigbax ka yimaada babaasiirta badanaa wuxuu yimaadaa saxaroos ka dib.
Nadiifinta ka dib, waxaad ku arki kartaa dhiig ama xariijimaha warqadda. Mararka qaar qadar yar oo dhiig ah ayaa lagu arki karaa musqusha ama saxarada. Sida laga soo xigtay Bulshada Mareykanka ee Qalitaanka Qalitaanka iyo Qalitaanka, qiyaastii 5% dadka qaba babaasiirta waxay la kulmaan astaamo, sida xanuun, raaxo la'aan, iyo dhiig bax.
Dhiigbax ka yimaada babaasiirta badanaa waa casaan dhalaalaya. Haddii aad aragto dhiig madow, waa inaad u sheegtaa dhakhtarkaaga, maxaa yeelay tani waxay muujin kartaa dhibaato ka jirta qaybta sare ee mareenka caloosha iyo mindhicirka. Calaamadaha qaar ee dheeraadka ah ee laga yaabo inaad kahesho babaasiirta waxaa ka mid ah kuwa soo socda:
Dareen buro ku wareegsan futada markaad ku nadiifinayso warqadda.
Mararka qaarkood waxay caadi ahaan ku dhegaan gudaha futada inta lagu jiro saxarada.
Nadiifinta oo adkaata
Cuncunka agagaarka futada
Dheecaan xabka badan oo dabada ku wareegsan
Dareemida cadaadiska hareeraha ano
Maxaa la sameeyaa markii baabasiir qarxo
Waxaan arki doonnaa waxa ay yihiin daaweynta ugu xiisaha badan guriga ee loo isticmaali karo in lagula dagaallamo dhibaatada noocan ah guriga. Maskaxda ku hay in xaaladaha oo dhan aysan tixraacin daaweyn caafimaad. Xitaa qaar dhiig baxa uma baahna daaweyn caafimaad. Si fudud qubays diiran ayaa kaa caawin kara yareynta xanuunka iyo levitation. Qaar ka mid ah daaweynta guriga waa sida soo socota:
Qubayska Sitz: Waxay ku lug leedahay adeegsiga wax yar oo caag ah oo lagu dhejiyo kursiga musqusha. Latina waxaa badanaa laga buuxiyaa biyo diirran oo qofku dhex fadhiyaa ilaa toban daqiiqo dhawr jeer maalintii. Waxay mari kartaa waddo dheer si loo yareeyo xanuunka levitation.
Codso baraf: Mid ka mid ah dariiqooyinka lagu yareyn karo caabuqa ayaa ah in la mariyo baakado baraf ah oo maro ku dhegan meelaha bararsan. Kaliya waa inaad dalbataa dhowr daqiiqo.
Ha ka daahin saxarada: Isla marka aad yeelato rabitaan ah inaad musqusha aado, waa inaad tagtaa oo aadan sugin. Sugiddu way adkeyn kartaa saxarada oo baabasiirku waxay u badan tahay inay noqdaan kuwo xanaaq badan.
Mari kareemada anti-bararka: waa kareemooyin ay kujiraan oo astaamo ku leh ama yareeya bararka babaasiirta.
Kordhi cunista cunnada (fiber) iyo biyaha: Tani badanaa waxay jilcisaa saxarada waxayna sahlaysaa ka bixitaankeeda. Adoo dadaal yar sameeya intaad saxarooneyso waxay kaa caawin kartaa yareynta dhibaatadan.
U tag dhakhtar ku saabsan baabasiirka
Sida ku xusan maqaal lagu daabacay joornaalka caafimaadka ee Clinics in Colon and Rectal Surgery, babaasiirta ayaa ah sababta ay dad badani caawimaad uga raadsadaan xiidanka iyo malawadka qalliinka labadaba. Haddii aad rabto inaad ogaato astaamaha ugu muhiimsan ee qofku u baahan yahay inuu dhakhtar u tago marka ay dhibaato noocan oo kale ah qabaan, waan lafa guri doonaa:
Dhiigbax joogto ah
In kabadan dhawr dhibic oo dhiig ah oo ku dhaca musqusha inta lagu guda jiro howsha daadgureynta.
Buro buluug oo buluug ah oo tilmaamaysa inay suuxsan tahay.
Haddii aad ka shakisan tahay inaad qabto babaasiir dhiig-baxa waa inaad raadsataa daryeel caafimaad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Haddii aan la daaweynin, babaasiirta dhiig-baxa ee dhiig-baxa leh waxay isku-cadaadin kartaa oo dhaawici kartaa xididdada dhiigga ee unugyada caafimaadka qaba ee ku xeeran. Daaweynta caafimaad ee dhiigbaxa baabasiirku waxay kuxirantahay darnaanta astaamaha iyo in babaasiirtu ay tahay mid gudaha ama mid dibada ah. Kuwa gudaha ku samaysma malawadka kuwa ka baxsanna waxay ka sameystaan ​​maqaarka agagaarka futada.
Aan aragno maxay yihiin daaweynta gaarka ah ee la siiyo noocyada baabasiir ee kala duwan ee jira:
Sawir qaadista infrared: waxaa jira nidaam adeegsanaya leysarka oo waxyeelleeya unugyada baabasiirka ee keena in uu yaraado oo kala baxo.
Kala soocista xargaha Waa nooc daaweyn ah oo ku lug leh in lagu dhajiyo faashad yar salka si loo gooyo dhiiga.
Sclerotherapy: wuxuu ka kooban yahay kimiko lagu durayo si uu ugu soo dhowaado inuu soo yaraado. Waxay ku habboon tahay oo keliya kuwa ka fudud.
Aan aragno waxa ikhtiyaarrada u ah kuwa dibedda:
Ka-soo-saaridda xafiiska: Xafiiska laftiisa, mararka qaarkood isla takhtarka ayaa soo saari kara dhibaato la'aan. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad ku suuxiso aagga suuxdinta deegaanka oo iska jar.
Hemorrhoidectomy: waa hab qalliin oo loo isticmaalo in laga saaro. Waxaa badanaa loo isticmaalaa kuwa ka daran, waaweyn ama soo noqnoqda. Cabashooyinka qaarkood waxay u baahan karaan suuxdin guud, iyadoo kuxiran darnaanta.
Haddii xinjirowga dhiiggu uu sameysmay 48 ilaa 72 saac ee la soo dhaafay, dhakhtarkaaga ayaa laga yaabaa inuu ka saaro gudaha. Nidaamkan fudud wuxuu yareyn karaa xanuunka. Suuxdinta maxaliga ah badanaa waa la adeegsadaa si aan wax raaxo ah loo dareemin inta lagu jiro qalliinka. Guud ahaan, looma baahna dhibco dheeri ah.
Haddii ay qaadato in ka badan 72 saacadood, dhakhtarkaaga ayaa kugula talin doona daaweynta guriga. Waxaa jira dhowr daaweyn oo guriga loo fududeeyo, sida qubayska kulul, boomaatada sixir badeedka, dabada, iyo isku-buufinta, si loo yareeyo xanuunka. Babaasiir badan oo thromboids waxay iskood iskaga baxaan isbuucyo yar gudahood. Haddii aad leedahay dhiig bax joogto ah ama xanuun baabasiir ah, waxaa ugu wanaagsan inaad kala hadasho dhakhtarkaaga wixii ku saabsan daaweynta suurtagalka ah ee xargaha cinjirka, kalabixinta, ama saarista.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto waxa la sameeyo marka baabasiir dilaaco
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Maxaa la sameeyaa marka babaasiir dilaaco